Izinto ezichaphazelayo ukuba iPhepha lakho lilayisha ngokukhawuleza njani kwiWebhusayithi yakho | Martech Zone
Besidibana nomthengi namhlanje kwaye sixoxa ngeziphi iimpembelelo Isantya sokulayisha iwebhusayithi. Kukho idabi eliqhubekayo kwi-Intanethi ngoku:
Iindwendwe zifuna izityebi ezibonwayo amava-nkqu kwimiboniso ephezulu ye-pixel retina Oku kuqhuba imifanekiso emikhulu kunye nezigqibo eziphezulu eziqhekeza ubungakanani bemifanekiso.
Iinjini zokukhangela zifuna i-ultra iphepha elikhawulezayo ezinamagama amakhulu axhasayo. Oku kuthetha ukuba ii-byte ezixabisekileyo zichithwa kwisicatshulwa, hayi kwimifanekiso.
Igunya lokukhangela liqhutywa ngu umxholo omangalisayo. Ngaphandle kokuba umxholo wakho kwabelwane ngawo, unqamla amandla awo okwenza i-backlinks kunye neziqendu kumxholo wakho ... uqhuba uphando lwezinto eziphilayo.
Isenzo sokulinganisa kuyo nayiphi na inkampani, ke masihambe ngendlela amaphepha alayisha ngayo kwaye nalapho iindlela zokuvalwa zinokuba khona.
Izibonelelo Izibonelelo zangoku zisebenzisa ifayibha yokunxibelelana ngesantya esiphezulu, ukuqhuba okuqinileyo, kunye nee-CPU ezikhawulezayo ukuqhuba izixhobo zendlela, iiseva ezisekwe kwilifu kunye neeseva zedatha. Ukuza kuthi ga ngoku, ukuba indawo yakho ibanjelwe kwizixhobo ezitsha kwindawo entsha enonxibelelwano oluphezulu iya kubonelela ngeziphumo ezilungileyo.
Isisombululo seDomain -Ukuba iphepha liceliwe, i-domain isonjululwe ngegama le-server. Eso sicelo siphantse ukuba sibe ngephanyazo, kodwa ungasoloko ucheba ixesha elincinane usebenzisa isicelo se- inkonzo ye-DNS ephethwe.
Ukulungiswa kweDatabase -Kwinkqubo yolawulo lomxholo wale mihla, kunyanzelekile ukuba indawo yogcino lwedatha yakho yenziwe ukuba inyuse ixesha elithathwayo ukubuza kunye nokuphendula ngedatha kutyelelo olungafakwanga ndawo. Kukwindlela elungileyo yokusingatha indawo yogcino lwedatha kwiserver eyahlukileyo kodwa kwindawo efanayo.
Ukulayisha ukulinganisa Itekhnoloji ikhona ukuhambisa iiseva ezininzi ukuba zabelane ngomthwalo weendwendwe kubo kunokuba zibeke umthwalo kwiserver enye. Obu buchwephesha bunika ithuba lokuqhubeka nokongeza ezinye iiseva echibini lakho njengoko imfuno iqhubeka nokukhula… ngamanye amaxesha ngexesha lokwenyani.
Izicelo zekhasi -Umendo emva kwesizinda sakho ubuza inkqubo yolawulo lomxholo okanye inkqubo yorhwebo ukufumana umxholo. Isalathiso sedatha yakho kunye nezixhobo zekhompyuter zinokuchaphazela isantya apho umxholo ufunyanwa khona.
Caching Page Uninzi lweeseva ezisebenza ngokugqwesileyo zibonelela ngesakhono sokudlula kwisicelo kwiziko ledatha kunye nokuhambisa umxholo ovela kwindawo efihlakeleyo.
Izicelo zeNtloko -Umxholo wephepha, kukho izibonelelo ezinje ngezikripthi kunye namaphepha esitayile aceliweyo ngaphambi kokuba iphepha lilayishwe kwisikhangeli. Izixhobo ezininzi zinokuqhuba ixesha lokulayisha iphepha lakho.
Izinto zekhasi -Ibrawuza yenza izicelo zibuyele kwiseva enye ngexesha. Ukuba kukho imimandla emininzi okanye iidomain, izinto ezinokucelwa ngaxeshanye. Ezinye iinkampani zithumela ii-subdomains ezininzi kwizikripthi, amaphepha esitayile, kunye nemithombo yeendaba ukuze zisebenzise indlela izikhangeli ezenza ngayo ezo zicelo. Ukuba ulayisha izikripthi ezininzi okanye iishiti zeetayitile, ukuzidibanisa kwelona nani lincinci leefayile kuya kuphucula ukusebenza kwakhona.
Inethiwekhi yokuThumela -Yikholwe okanye ungakholelwa, iJografi idlala indima ngexesha elithathayo ukulayisha indawo yakho. Ukuba ukufutshane neseva yakho, iyakhawuleza. Ukuba ukulo lonke ilizwekazi, liyacotha. A CDN unokukhuphela imifanekiso yakho kwingingqi kwaye uyikhonze ngokukhawuleza kubaphulaphuli bakho.
Ukunyanzeliswa -Iiseva zeWebhusayithi ezibandakanya uxinzelelo lwe-gzip lwezixhobo zewebhu, imifanekiso eyiyo Unyanzelekile, Izikripthi kunye ne-CSS ecociweyo ukususa isithuba esingaphandle kunokubanokuphucuka okumandla kwisantya sokulayisha iwebhusayithi.
UkuLazy -Kutheni ulayisha imifanekiso ukuba into leyo ayibonakali ephepheni? Ukuba uqaphela kwindawo yethu, njengoko uskrolela ezantsi kwiphepha imifanekiso iyalayishwa nje ukuba zibonakale kunokuba zibonakale ngaxeshanye. Ukulayisha ngobuvila kunokukhawulezisa kakhulu isantya sokulayisha iwebhusayithi.
Amathala eencwadi abanjiweyo -Iindawo ezinje ngoGoogle ngoku zibamba iilayibrari ekwabelwana ngazo kwiilayibrari eziqhelekileyo kunye neefonti. Kungenxa yokuba iibrawuza zigcina ezi zibonelelo, nokuba undwendwe lufika kwindawo yakho okokuqala-banokuba sele benelayibrari ebanjiweyo ekuhlaleni.
Ukulayishwa kweAsynchronous -Ayisiyiyo yonke into ekufuneka ilayishwe kwangoko kwiphepha. Izinto ezinjengokwabelana ngamaqhosha entlalontle, umzekelo, zinokucotha ngokumangalisayo kunye nokurhafisa kwisikhangeli. IiNkonzo zoLawulo lweeThegi inokukunceda ekulayisheni izixhobo emva kokuba iphepha liphelile kunokuba ulinciphise.
UkuSebenza kweSoftware Uyilo oluphendulayo, ngokufanelekileyo, wonke umsindo okwangoku ukubonelela ngamava omsebenzisi angaguquki nokuba ujonge indawo yokujonga isixhobo sakho. Kodwa ikwanokucothisa ukujonga kweselfowuni- apho ipesenti ekhulayo yeendwendwe ifikayo.
Iifom zevidiyo -Ukuba ubandakanya imvelaphi yevidiyo kwindawo yakho, kuyakufuneka uqiniseke ukuba zilungiselelwe kwaye zixinaniswe kwisikhangeli ngasinye. Ividiyo yokulayisha kancinci inokutsala ixesha lomthwalo wesiza kwaye iphazamise iindwendwe zakho.
Nantsi i-infographic esandula ukukhutshwa evela Ukuqala kweLogic zenze njani iiwebhusayithi Ukutyeba, kunye nefuthe.
tags: ukulayishwa kwe-asynchronousUkunyanzeliswayomxholo wenethiwekhiCSSisisombululo sedomeyiniucinezelo lwegzipokuphezuluisicelo sentlokoamathala eencwadi abanjwayouxinzelelo lomfanekisoukulayisha ubuvilaukulungelelanisa umthwaloisantya sokulayishaamaxesha okulayishaUkulungiswa kwefowuniukugcinwa kwephephaizinto zekhasiisicelo sephephaukwenzaisantya sokulayisha indawoisitayile sephephaizimbo zokunxibaucinezelo lwevidiyoiifomathi zevidiyoukusebenza kwewebhuIsantya sokulayisha iwebhusayithiamaxesha okulayisha iwebhusayithi
Yintoni intanethi yenethiwekhi yokuhambisa umxholo (CDN)?
Agasti 6, 2015 kwi-11: 13 AM
Ndivumelana nawo onke amanqaku ali-12 achaziweyo.
Ukukhula kwetrafikhi yewebhusayithi, ndicebisa ukuba uhambe ukusuka ekubenimba ngokuhlanganyela ukuya kwi-VPS okanye kwi-WordPress yokubamba, ngelixa ulandela oko kudweliswe ngasentla.